तामाकोशीको अध्यक्षमा को-को दाबेदार: एमाले-कांग्रेसका पुर्व जिल्ला नेतृत्व मैदानमा ! - Kantipath
तामाकोशीको अध्यक्षमा को-को दाबेदार: एमाले-कांग्रेसका पुर्व जिल्ला नेतृत्व मैदानमा !
१५ हजार ८३५ मतदाता भएको यो गाउँपालिकामा यसअघिको निर्वाचनमा प्रमुख र उप-प्रमुख दुवै एमाले विजयी भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा एमाले बलियो भएको तामाकोशी गाउँपालिकामा काँग्रेस र माओवादीको पनि अभियान जारी छ । एमाले यसपटक जसरी पनि आफू विजयी हुने दाबी सहित मैदानमा छ, एमालेलाई विरासत गोजाउनु पर्ने चुनौती छ। दोलखाको अन्य पालिकाको तुलनामा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति तामाकोशी गाउँपालिकामा सशक्त छ । तामाकोशीका ७ वटा वडामध्ये कांग्रेसले ३ वटा वडामा र एमालेले ४ वटा वडामा जितेको थियो, माओवादीले भने तामाकोशीमा खाता खोलेको थिएन ।